लौठसल्ला खेती गर्ने हो ? प्रतिकेजी १५ लाखसम्ममा बिक्छ ! « GDP Nepal
Published On :2February, 2019 6:38 am
काठमाडौं । नेपालका वनपाखामा पाइने दुर्लभ वनस्पती लौठसल्ला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी १५ लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । क्यान्सरजस्ता रोगको औषधिका लागि केमिकल पाइने लौठसल्ला नेपालमा पाइने भए पनि यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन ।
फर्माकम्पास डटकमका अनुसार भारतले हालै ताइवानमा प्रशोधन गरेर प्रतिकेजी झण्डै १५ लाख अर्थात १३ हजार ५ सय २२ डलरमा बिक्री गरेको छ । तर, नेपालमा भने संरक्षणको अभावमा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग आधुनिक औषधि ट्याक्ससोल नामक केमिकल बनाउन यसको उपयोग हुने गरेको छ ।
अहिले काभ्रेको बेथानचोकमा यसको व्यावसायिक खेतीसमेत सुरु भइसकेको छ । यसको ५ देखि १० वर्षमा पात निकाल्न सकिने र ठूलो रुख हुन लामो समय लाग्ने गर्दछ ।
विश्वमै संकटग्रस्त रूपमा रहेको र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि मुख्य वनस्पतिको रूपमा लिइने ‘माइरेई’ लौठसल्लाको बल्ल नेपालमा गणना सुरु भएको हो । नेपालसहित चीन, म्यानमार, इण्डोनेसिया, भुटान लगायतका देशमा यो पाइन्छ ।
नेपालमा पाइने तीन प्रजातीको लौठसल्ला मध्ये तीन प्रजाती कन्र्टोटा पश्चिम नेपालमा, माइरेइ मध्य नेपालमा र वाली चियानामध्यदेखि पूर्वसम्म पाइने गरेको छ ।
विरुवाहरू एक वर्षका भएपछि यिनीहरूलाई काँटछाँट गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा विरुवामा धेरै हाँगा निस्कन्छन्। यसरी प्रत्येक वर्ष छाँट्दै जाँदा करीब ४ वर्ष पछि विरुवाहरूबाट पातहरू /डाँठहरूको उत्पादन लिन सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष गाइवस्तुको मल थप्दै जाँदा विरुवाहरू राम्ररी हुर्कन्छन्।
हालसम्म व्यवसायिक खेतीको प्रचलन नभइसकेकोले वार्षिक उत्पादनको आँकडा उपलब्ध छैन। चिया वगानको रूपमा विकास गरी वर्षको दुई पटक हाँगाहरू काँट छाँट गरी बाली भित्र्याउन सकिन्छ।